ခရီးတစ်ခုထွက်တယ်။ | မာသင်
ဘယ်လောက်ဝေးဝေးကိုရောက်ခဲ့သလဲ ဆိုတာထက် ၊ ရောက်သလောက်ခရီးမှာ ကိုယ့်ဘဝအတွက် ဘာတွေရလိုက်သလဲ ၊ လမ်းခရီးတစ်လျောက် အခြားသူတွေရဲ့ဘဝကို ဘယ်လို ဘယ်လိုအကျိုးပြုခဲ့သလဲ ဆိုတာ ပိုအရေးကြီးတယ်။
အောင်မြင်မှု ခရီးလား ?
ငွေကြေး ခရီးလား ?
မိသားစု ခရီးလား ?
ဘ၀ ခရီးလား ?
ဘယ်ခရီးပဲ ဖြစ်ဖြစ် အထက်ပါ စာကြောင်း မှန်တယ်။ ။